Labsa Tokkummaa ABO fi THBO tasifamee ilalchisee ibsaa kename });
Labsa Tokkummaa ABO fi THBO tasifamee ilalchisee ibsaa kename
Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa
Fulbaana 26, 2018
Tokkoffaa: Guyyaa walii galtee kana mallateesine irraa kaasee, akka tokko taane. Maqaa jaarmya keenyaa ABO ta’ee, sagantaa siyaasaa, heera fi seera tokko jalatti akka sochoonu.
Lammaffa: Caasaan jaarmayoota lamaanii, yeroo gabaaba keessatti akka wal-dhunfaatuutti waliif galame.
Sadaffaa: Hanga caasaan wal dhuunfatutti, hojjii waliin hojjatamu irratti waan godhamuu qabu maraa irratti tokkummaa fi walhubachiisuun hojjachu.